Filtrer les éléments par date : jeudi, 09 juillet 2020
jeudi, 09 juillet 2020 09:37
CCO Ivato: Hametrahana « Centres de traitement Covid-19 »
Hapetraka manomboka ny zoma 10 jolay ny Centre de traitement Covid-19, ka ao amin’ny CCO Ivato no hanaovana izany, indrindra ho an’ireo marary sy mitondra ny otrikaretina Covid-19, izay mihamitombo eto Analamanga.
200 farafahakeliny ny marary horaisina amin’ny toerana iray, izay ahitana mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana miisa 25 ka hatramin’ny 55 isaky ny toerana fandraisana ireo marary.
Ireo « Centre de traitement » ireo dia atao handraisana ireo marary manana soritr’aretina efa mihamiombo nefa tsy afaka ny hanao fihibohana any an-tokantranony noho ny antony maro isan-karazany.
jeudi, 09 juillet 2020 09:03
CHU Anosiala: Natao handraisana ireo « cas grave » voan’ny Covid-19
Hatomboka eny amin’ny Hopitaly Anosiala Ambohidratrimo ny fandraisana an-tanana ireo marary voan’ny Covid-19 efa « cas grave ». Anisany nivoitra nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 8 jolay io. Hisy ihany koa toerana hafa voatokana sy fandriana any anatin’ireo « Centres de traitement » handraisana sy hitsaboana azy ireo araka ny tokony ho izy.
Ireo izay tsy manana ny soritr’aretina kosa dia manentana azy ireo ny fanjakana hihiboka any an-tranony, ary handray ny fanafody sy hanaraka ny torohevitry ny mpitsabo amin’ny fampiharana ireo drafipitsaboana omen’ny mpitsabo.
Côte d'Ivoire: Maty tampoka ny Praiminisitra Amadou Gon Coulibaly
Nindaosin’ny fahafatesana ny alarobia 8 jolay 2020 teo amin’ny faha-61 taonany ny praiminisitra lehiben’ny governemantan’i Côte d'Ivoire, nanomboka ny taona 2017, Amadou Gon Coulibaly.
Niatrika filankevitry ny minisitra izy no nitambotsotra, ary nitarika tamin’ny fahafatesany. Olan’ny fo no voalaza fa antony.
Vao avy nitsabo tena nandritra ny roa volana tany Frantsa izy, ary vao andro vitsy izay no tafaverina tao Côte d'Ivoire.
Kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena hatao afaka telo volana i « AGC », ary voalaza fa « favori » rehefa nanambara fa tsy hirotsaka intsoiny i Alassane Ouattara, filoha amperinasa.
jeudi, 09 juillet 2020 08:52
Covid-19: Hisy ny fandraisana eny anivon’ny CSB
Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly fa hapetraka ny lamina manokana handraisana ireo marary eny anivon’ny CSB, ka hisy ny fanomezana ireo marary ny fanafody sy ny CVO, ary omena fitsaboana avy hatrany ireo izay mitondra ny soritr’aretina mba hisorohana ny «forme grave».
jeudi, 09 juillet 2020 08:51
Covid-19: Hisy Filankevitry ny Minisitra anio
Hisy Filankevitry ny Minisitra anio 09 Jolay 2020 izay iarahana amin’ny Holafitry ny mpitsabo sy ny Holafitry ny mpivarotra fanafody.